Orlistat kuti uwedzere kurashikirwa: Ungabvisa sei mafuta nokukurumidza?
1. Chii chinonzi Orlistat?
2. Ndivanaani isu?
3. Howlistat inoshanda sei?
4. Ndinofanira kutora sei Orlistat?
5. Chii chaunofanira kudzivisa paunotora Orlistat?
6. Is Orlistat ini here?
7. Ndezvipi zvinobatsira zvekushandisa Orlistat?
8. Ndeipi migumisiro yechirwere yekutora Orlistat?
9. Ndeupi musiyano pakati peOralat, Sibutramine, naLorcaserin?
10. Pane mishonga inobata mhinduro dzeOrlistat here?
11. Zvinonyanya kukohwa nezveOrlistat
Chii chinonzi Orlistat?
Hazvina mhosva kuti vangani kuora kurasikirwa michina zvakakundikana, Orlistat ichava mambakwedza matsva kwauri. Kana iwe wakanga uchishamisika kuti orlistat chii, nhasi iwe uchazoziva zvakawanda nezvazvo.Orlistat iri pamusoro pekambani zvakanakisisa kuora kurasikirwa nemishonga iyo inobatsira vanhu tolose kuremera nokukurumidza. Unoda humwe uchapupu here? Zvidzidzo zvakaitwa zvakaratidza kuti kana ukashandisa Orlistat, muviri wako ucharasikirwa nekureruka kudarika nguva yekudya kwega. Kana iwe uchiri kukanganisa kuti iwe ungatora Orlistat, ini ndichakuudza zvakawanda nezve Orlistat mazano, Orlistat zvitsva uye kupi kunotenga Orlistat uye iwe unoda kuti iwe uzive nezvazvo kare. Kana uchinge wakaziva nezvechishamiso ichi chemishonga, iwe uchanzwisisa kuti iyo inodhaka mushonga mukurema kwako kurasikirwa rwendo.
Tiri Phcoker.com, chinoshandiswa neChina chinoshandisa kuparadzirwa, kugadzira, uye kutengesa kwemasimiti ekugadzira mishonga uye michina yakasanganisira Orlistat.
Mune basa redu, tinoshandira vanhu vakaisvonaka, vakaedza uye vakaedzwa kubva kumarudzi akasiyana-siyana. Kubudirira mubasa redu kunounzwa kuburikidza nehutano hwavo hwehutano, kudzidziswa kwakanaka, uye kushanda kwakakosha. Sechirongwa, tinoedza nesimba kuti tiwedzere kubudirira kwavo kuburikidza nekudzidzisa nguva dzose, kudzidzisa nekudzidzisa. Isu tinovapawo zvigadzirwa zvakakwana zvekutaurirana kuvabvumira kupa mhinduro uye kuwedzera maitiro avo.
Isu tinopa mikana yakanakisisa yemhando mumusika. Iwe haufaniri kuputsa bhangi kuti utenge kubva kwatiri; iwe uchashamisika kuti zvinokwanisika sei. Zvigadzirwa zvedu ndezvechokwadi, uye zvichashumira chinangwa. Inogoneka kuburikidza nechokwadi chokuti tinoshandisa midziyo yekutanga mumatambo edu ose ekugadzira. Panguva yekugadzira, tinoteerera kumitemo yose uye checks chekuita kuti tione kuti tinopa zvinhu zvinogutsa zvinodiwa nevatengi vedu.
KuPcoker tinoshanda zvakaoma kuchengetedza nzvimbo dzedu dzakachena kuburikidza nekuita chokwadi kuti mabasa atinoita tinoisvibisa. Pakupedzisira, vatengi vedu ndivo vanoisa pakutanga. Basa redu rekutengesa rinoda zvikuru uye rinopindura kune wese mutengi. Chimwe chinhu chinotiparadzanisa kune vamwe ndechokuti tinotora muteereri wepfungwa zvakanyanyisa. Iva kuva kunyunyuta kana kurumbidzwa; inzwi rako rinogamuchirwa nguva dzose. Tenga kubva kwatiri nhasi uye uone zvakanakisisa mazano pasi rose.
Howlistat inoshanda sei?
Orlistat haishandi nekudzivisa kudya; iyo inoderedza kuwanda kwemafuta ayo muviri wako unobvisa kubva pazvokudya zvaunodya. Kana ikangozvibatanidza kumucheturo wemudumbu lipase, inoivhara kubva pakutsvaira kana kuputsa mamwe malekoro emafuta. Nhamba yemafuta yakavharwa ndeye 25%. Nekudaro, mafuta asina kukwana anoenda mumugwagwa uye anoparadzwa semarara.
Uyewo, zvidzidzo zvakaitwa zvinoratidza kuti kana iwe uchitora Orlistat, mafuta episceral anoderedza zvakanyanya. Kubudirira kweizvi ndechokuti inoderedza dambudziko rekutambura nekurohwa, chirwere chemwoyo, kukwira kweropa, uye chirwere cheshuga 2.
Ndinofanira kutora sei Orlistat?
Kuti uwane zvakanakisisa kunze kwechirwere ichi, unofanirwa kutevedzera kurudyi Orlistat dosage. Kuuya mu-capsule form, iwe unogona kugara uine imwe uye utore katatu pazuva. Kuti uwane zvidimbu zveOrlistat zvaunoda, unofanirwa kuzvitora nguva pfupi mushure mekudya kunemafuta kana kwemaawa imwe chete mushure mekunge. Kana ukadya kudya kusina mafuta, iwe unorayirwa kuti udzike chirwere chako. Uyewo kana iwe uchikwira kudya, iwe unofanirwa kupotsa muroti zvakare.
Pasinei nekuve kurasikirwa kwekureruka, haufaniri kudya burgers yakaoma nguva dzose. Kudya zvokudya nemafuta akawandisa kungaita kuti usashamiswa nemigumisiro yemigumisiro. Kana iwe uchida kuona maOrlistat, iwe unofanirwa kudya mafuta emakisi akawandisa uye zvakakosha zvezvokudya. Kazhinji, chikafu chinodarika 30% yemafuta haisi-enda nzvimbo. Somuenzaniso, kana iwe wakatora 1000 makorikori pazuva, kwete kupfuura 330 yavo inofanira kunge yakafanana nemafuta.
Kuti uve nechokwadi chokuti uri munzira yakarurama, chengetedza mafuta ose aunotora mukudya kwose. Unoita sei izvi? Iva nechokwadi chokuti unoverenga mavara pamazvokudya zvose zvaunodya. Nokuteerera huwandu hwehutano hwaunotora, iwe unogona nyore nyore kuverenga huwandu hwemafuta uchatora. Kana iwe uchida kuuya neurongwa hwakanaka hwekudya, mufudzi wenharadzi, mupi wehutano kana chiremba anogona kukubatsira. Zvose Zvaunofanira Kuziva Usati watenga SARMs
Chimwe chinhu chaunoda kucherechedza ndechokuti mafuta-kudzivirira zvinhu zvechirwere ichi anoita kuti muviri wako usakwanisa kuwana mavhithamini ane mafuta. Kuti udzivirire muviri wako kubva pakushaiwa mavithamini, tora mazuva akawanda multivitamines ane K, E, D, A, uye beta-carotene pavanenge vachirapwa nemushonga uyu. Kuti uzive nzira yakanakisisa yemamtivitamines kutora, iwe unofanira kufunga kutaura nachiremba wako. Zvisinei, haufaniri kutora Orlistat uye mavitamini panguva imwecheteyo. Tora mavitamini maviri kana kupfuura maawa asati atora mishonga.
Chii chinoitika kana iwe uchinge warasikirwa neipi?
Dzivisa kushayikwa chiitiko. Iwe haufaniri, zvisinei, unetseke kana zvichiitika; tora iko nokukurumidza zvichibvira. Kana yakapera awa imwe kubva kubva pawakadya kudya, usatora muto usinganzwisisi uye enda pane inotevera sezvakarongwa. Usambofa wakaedzwa kuti utore mishonga inowedzera nechinangwa chokugadzira chirwere chinorasika. Iwe unogona kuguma uine chepfu iwe pachako.
Dzimwe nguva unogona kuziva kuti unofarira kudya mimwe yemichero kana michero chete. Hapana kunyanya kunakidzwa mukufadzwa nechikafu chisina mafuta; Zvose zvaunofanirwa kuita ndezvekuti iwe urege kurasikirwa neAlllistat mushure mekudya.
Chii chinoitika kana ndikanyanyisa?
Nhamba yepamusoro yeOrlistat haiti kukupa mamwe mazano. Pane kudaro, zvinogona kukuvadza muviri wako. Kana iwe ukatora zvinopfuura chirongwa chakakurudzirwa, iwe unogona kunge uine maitiro anowanzoita maviri-ane chokuita nemigumisiro. Izvo hazvina kukwana mumashanga, mafuta anonyangadza, kushungurudza pamuviri, gesi, kurarisa, kurutsa, uye kusuruvara. Iyo migumisiro yemigumisiro inogona kuva yakaoma kana iwe ukadya kudya kwakakora-mafuta uye wakatora Orlistat kudengesa.
Kana izvi zvichiitika, iwe unofanirwa kuzviisa kuna chiremba kana kuti kudana chinyorwa chekubatsira.
Chii chaunofanira kudzivisa paunotora Orlistat?
Kana uchinge uri paOrlistat kurapwa, unofanirwa kudzivisa kutora zvinhu zvishoma. Yokutanga ichingwa chakakora kwazvo. Chikonzero chekudzivisa izvi ndechokuti zvinogona kutungamirira kune zvisingafadzi migumisiro pamatumbu uye mudumbu. Izvo hazvirevi kuti unorega kusadya mafuta cheropi; heuno mazano pamusoro pekuti iwe unogona kuderedza sei mafuta akawanda waunodya:
Iwe unogona kusarudza kushandiswa kwema-fat-cook muuce inenge isiri pasi pe5 gramu yemafuta pa 100 magamu emuchero.
Enda kunzvimbo dzakaderera-mafuta, zvishoma-mafuta mafuta, che-calori yeakururu, uye kudya kwakakwana kwemazi, semuenzaniso, mukaka wakagadzika kana wakadzika.
Dzivisa kuwedzera mafuta kana uchibika; panzvimbo pacho, iwe unogona kuisa microwave, kubika, kupinza kana grill.
Dzivisa kudya ganda rekuku uye kuputika pamusoro penguruve. Iwe unogona kuenda panzvimbo yekucheka kwemaviri uye kubvisa mafuta anooneka.
Sarudza mafuta akaderera kupararira pane kugara / maruva anopararira.
Cyclosporine haafaniriwo kutorwa pamwe neOrlistat. Kana uchida kuitora, inofanira kuva maawa matatu mushure mekunge watora Orlistat.
Uyezve, Levothyroxine (yakadai saSyroid) inofanira kudziviswa paine mishonga iyi. Iwe unogona kutora maawa mana kana kupfuura maawa asati apedza uye apedza kutora Orlistat.
Is Orlistat ini here?
Kuva kuora kurasikirwa kwekuwedzera, kuchakushandira iwe kana iwe uchida kurasa uremu. Kudya uye kurovedza muviri zvinogona kuonekwa sechinhu chisina maturo, asi chirongwa chekutakura kwemairi chinosanganisira kushandiswa kweOrlistat ndicho chaicho chaicho. Kana ukashandisa Orlistat, hazvirevi izvozvo iwe unofanirwa kugara pasi nekumirira mhinduro. Kutevedzera mararamiro anoraramiro anosanganisira kudya utano hwakanaka uye kuva nekurovedza muviri nguva dzose kuchakubatsira kurasikirwa nemutoro zvakasimba.
Zvakanaka here kuti utoreOrlistat? Ndiyo yakanakisisa kurasika kurasikirwa nemishonga asi iwe unoziva sei kuti inguva yokuti iwe uremerwe uremu. Kana ukangonzwisisa kuti ungaongorora sei kana uri kunyanyisa, iwe unogona kuziva nguva yekutora danho pakuderedza uremu. Kunyange zvazvo nzira yakakwana yekuudza kana iwe uri kunyanya kuwandisa ndeyokuona chiremba, zvikwangwani zvishomanana zvinogona kukubatsira kuti uudze kana wapfuura mutsara. Chinhu chokutanga chinogona kukupa foni yokumutsa ndeyepamusoro BMI. Nhamba ye BMI inoratidzirwa inoratidza uremu hwemuviri wako miviri kuburikidza nemamita akareba kana urefu. Mune mhando, unogona kukwanisa kutarisa urefu uye uremu kuti uone kana muviri wako guru index (BMI) yakanaka. Kana yako BMI iri 18.5-24.9, inofungidzirwa seyakanaka apo iyo ye25-29.9 inoratidza kuti iwe uri kunyanyisa.
Imwe nzira yakanaka yekuziva kana iwe uri kunyanya kuwandisa ndeyokuenzanisa chiuno chako chidiki. Chimiro chechiuno chakakwirira kudarika 35 inches muvakadzi kana 40 inches muvarume chinonzi chisina kunaka. Chikonzero ndechekuti kana wave wakanyanyisa kuninipa mafuta; kune mafuta akawanda akapoteredza nhengo dzako dzinokosha saka ichiwedzera ngozi yekutambura nemasikirini emishonga, kukonzerwa kweropa, high cholesterol uye chirwere cheshuga. Mafuta ekuzorora anowedzerawo uturu husina kunaka hunoita muviri wako. Muenzaniso wemakemikari ndeyei cytokines inogona kutungamirira kumaronda emwoyo. Zvinoshamisa kuti, zvose zvaunoda tape chiyero, uye iwe unogona kugara uchizviita iwe pachako. Unogona kuedzwa kuti unye mumumimba mako, asi izvi zvinongokupa mhinduro dzisina kururama.
Kuva neBMI yepamusoro pe 25 uye chiuno chinenge chiri pamusoro pe 40 inches kumurume kana 35 inches for mukadzi haafaniri kuita kuti unzwe wakadzika. Mashoko akanaka ndeokuti kana uchangoshandisa orlistat, chengeta kudya kwako uye utange kuratidza iwe uchadurura mapepa akawanda kupfuura iwe unofunga. Uye nokukurumidza iwe uchatanga, zviri nani zvichave kwauri. Mhinduro yeOrlistat inotanga kukwikwidza pakarepo paunotanga mishonga.
Ndezvipi zvinobatsira zvekushandisa Orlistat?
Munguva yakapfuura, nzira yekurasikirwa kwemazivi yave ichicheka pamakoriri amunotora. Vaizoshandura iyo burger kune imwe saradhi yemichero, inotora mandimu panzvimbo yekeke uye izvi zvaizovimbisa kwavari kuderera kwepaundi. Mazuva ano, haufaniri kutadza kutora cookie yako yaunoda, zvakakosha ndeyekuti usaitora zvakanyanya uye panguva imwe chete tora orlistat.
Kuva kuora kurasikirwa kwekuwedzera, hazvizogadziri chishuvo chako asi kunongoderedza kunwa kwemafuta asina kunaka. Panzvimbo pane kuchinja huwandu hwezvokudya zvaunodya, zvinoshandura chiyero icho muviri unotora. Kana pane imwechete yekudzivirira kwechina chemafuta anodyiwa, muviri unomanikidzwa kushandisa mafuta akachengetwa kuti awane simba zuva rega rega mabasa.
Yakabatanidzwa nekugadzirisa muviri uye kudya kunovaka muviri, ichi chinodhaka chichakubatsira kuti uremerwe uremu kukubatsira kuti usvike kumuviri wako.
Hakusi chete kuvimba kwako kunowedzera kukwirira asi kuzvikudza kwako kunovandudza zvikuru. Vanhu havachagoni kuramba vachitarisisa pamusoro penyu nekuda kwemafuta saggy; mamwe mazano anozouya iye zvino.
Kurasikirwa uremu ndicho chinhu chakanakisisa chaungaita mumuviri wako. Iyo inokudzivirira kubva pakushanyira nguva dzose kuchipatara sezvo inoderedza ngozi yekuwana zvirwere zvakanyanya kusanganisira:
Gastric reflux zviratidzo
Kinee matambudziko anokonzerwa nekurema kwakanyanya
Chirwere chisina simba (zvikurukuru muvakadzi)
Dzimwe mhando dzekenza
Tora 2 chirwere cheshuga uye zvinetso zvinosangana nayo
Izvo zvichaita kuti iwe uwedzere simba uye foni. Kana uchinge uremerwa uremu, unotakura uremu huripo saka pane kusanyanya kuderera pamasangano nemisungo. Iwe unenge uine simba rakawanda kuti uite mabasa ako uye kumashure, gumbo, mabvi netsoka dzemakumbo zvichava chinhu chekare. Chii chinowedzera kuti iyo inch inoparara yakapoteredza dumbu rako inoderedza kushungurudzwa kwemashure ako nemazana mapaundi. Kudengesa hakuzove kukwira mumunda zvakare; iwe unogona kuzviita nyore nyore pasina kushungurudza.
Iwe uchaona humwe huri nani mukufema kwako uye kurara. Kurara kwakanakisisa kuchakubatsira kuti uwedzere simba rose zuva rose. Kazhinji, Orlistat yakakodzera kuti utano hwako hwose huvepo.
Ndeipi migumisiro yechirwere yekutora Orlistat?
Zvakanaka kuona nemigumisiro yeOrlistat kana uchitishandisa. Iwe unogona kuwana mamwe emigumisiro kana kwete sekunge watora chero mimwe mishonga. Zvakawanda zvemigumisiro inouya nekushandiswa kweOrlistat inobatana nenzira iyo inoshanda nayo mumagadzirirwo ako. Zvinowanzova zvinyoro uye zvinogara zvichiitika kana uchitanga kurapwa. Zvinowanzoitika mushure mokunge watora kudya kwemafuta akawanda. Nenzira, vazhinji vavo vanoenda sezvo kurapwa kuchiri mberi uye mushure mekutevera kudya kwakakodzera.
Iyo inowanzova nemigumisiro inobata inopfuura munhu mumwe chete kune vanhu gumi ndeye:
Musoro-Kana uine kurwadziwa kwepamuviri, pane nzira dzaungagona kuzvideredza. Inosanganisira kutora mishonga inoderedza marwadzo. Uyewo, unogona kuedza kutora ginger chai kana caffeine. Kuisa musoro wako uye kuita zvekuzorora kunogona kukubatsira kuti usanyanya kurwadziwa. Imwe nzira yaungagona kubata nayo musoro ndeyokushandisa compress inopisa kana kupisa pad kuti uderedze kurwadziwa.
Kusuruvara kwepamuviri / kusagadzikana-Uturu hwemimba haufaniri kukunetsa. Kana zvichiita mabasa ako ezuva nezuva unogona kusarudza kuisa gorosi rinopisa kana bhodhoro remvura inopisa padumbu rako. Uyewo, iwe unogona kuzviwisira mumvura yakachena. Kana izvi zvisingaoneki kushanda, edza kunwa mvura yakachena, semuenzaniso, mvura.
Kuwedzerwa kudiwa kushanyira ii- Kana iwe uchizviona uchizvidza zvinopfuura zvaunowanzoita, iva nechokwadi chokuti hauna hanya nechishuvo chekuita izvozvo. Kusava nehanya kwekudana kunongowedzera zviratidzo. Hazvifananidzi kukonzera alarm asi kana ichiripo, tsvaka rubatso rwechiremba.
Kubudiswa kwemafuta- Kana uchinge uri kuOrlistat kurapwa, unogona kuona kuti uri kushatisa zvipfeko zvako zvepasi kana kuva nekunzwa kuti nzvimbo yakakomberedza anus yako inopisa. Kuti urege kunyara, iwe unogona kupfeka shangu dzerima uye kutakura dzimwe mbatya dzepamusoro kana uchibuda mumba.
Zvitubu-Zvine mafuta ane chigodo zvinoreva kuti muviri hauna kugunzva mafuta uye panzvimbo payo wakabvisa. Nokudzivirira kudya zvakanyanya mafuta, unogona kudzivirira muviri wako kuti urege kubvisa mafuta akawanda.
Mucheka ganda-Munhu wose anoda kuva necheka rakachena, asi kana kupisa kweganda kuchikura, heano mazano kuti uzvichengetedze. Yokutanga iri kuchenesa ganda rako ne sipo isina kunyora pasina. Kuchera uye kushandisa zvishandise zvinogona kukuvadza kupfuura kunaka. Kana iwe uchinzwa huchitsotsi kana kurwadziwa, iwe unogona kuisa jira rakanyoro pamhanje. Anopfuura-the-hydrocortisone cream inogona kukubatsirawo.
Kudzokera shure- Heano mazano pamusoro pekuderedza kushungurudzwa kumashure; shandisa kupisa kana mazaya pane zvikamu zvemukoko wako zvinotambudza, tora painkillers zvakadai se naproxen, ibuprofen, uye aspirin. Kushandisa kunogona kubatsira kubatsira kuderedza marwadzo asi kana ikasununguka, tsvaga kurapwa.
Ane zvirwere zvekurwara, hutonda, chills, uye fever. Iwe unogona kufunga uchigara uchidzivirira kuti urege kudzivirira, uye kana uchinge uchinzwa marwadzo, iwe unogona kutenga kupfuura-the-counter painkillers yakafanana neacetaminophen.
Zviratidzo zvinotonhora zvakadai sokukanganiswa, kunyorera, uye pfumbu rakakosha-zviratidzo zveCold dzimwe nguva zvinosanganiswa nekushandiswa kweSezvo usinganzwisisiki sezvazvinogona kukuita iwe, heuno mahedheni ekubata nemanzwiro. Shandisa huro pako, unowana zororo zvakawanda uye unwe mvura yakawanda kuti uzvidzivirire kubva pakuneta. Iwe unogonawo kushandisa madonhwe emvura kuti ubatsire mukudzivirira kubatana kwemanzi. Tsvaka rubatsiro rwechiremba kana zviratidzo zvinotonhora zvinobata mabasa ako ezuva nezuva.
Matambudziko nemasana kana mazino- Kutarisana nechinetso ichi iwe unofanirwa kupwanya mazino ako nguva dzose, kushambadza gum yako uye kushandisa mouthwash kazhinji. Iwe unogona kuita muromo wako kumba kumba nekusanganisa chikamu chechina chekubika soda, yechisere yepasipuni yemunyu uye mukombe wemvura inodziya.
Kuora kunorwadza, marwere, kurutsa, kushungurudza uye kurwadziwa kwepamuviri-Inwa mvura yakajeka yakajeka kuitira kuti usapinda mumvura-usanyanya kunwa doro kana caffeine. Edza kudya maantibioti asi kana izvi zvisingakubatsiri, tsvaka rubatsiro rwemupi wehutano.
Kana iwe ukapfuura mune imwe yemigumisiro iyi, iwe unofanira kuitora semhepo inokurumidzira uye tumira chiremba pakarepo. Vari;
Kutambudzika kwakanyanya kwemuviri kusingaendi.
Hives kana kupfutidza zvakanyanya
Kuoma kufema kufema
Ndeupi musiyano pakati peOralat, Sibutramine, naLorcaserin?
Item yakaenzaniswa Orlistat (96829-58-2) Sibutramine (84485-00-7) Lorcaserin(846589-98-8)
Mamiriro ekuita Howlistat inoshanda sei? Orlistat inoshanda kuburikidza nekudzivirira kwemafuta ekudya mumuviri. Somugumisiro, muviri unoshandisa mafuta akachengetwa saka zvichiita kuti kurashikirwa kwekurema. Lorcaserin inoshanda kuburikidza nekuita kuti munhu anzwe akazara saka kunoderedza kuwanda kwezvokudya zvinotorwa. Inoita izvi kuburikidza nekukurudzira maStotonin 2C receptors. Sibutramine inoshandiswa nekuchinja nzira iyo maurotransmitter ari muuropi anoshanda. Inhibisa reuptake yavo saka inoshandura nzira iyo muviri unoramba uine uremu.
Zvimwe zvikanganiso pamuviri Orlistat zvinokonzera migumisiro iyo inonyanya kuchinja chirwere chekudya segorosi, seguruko rakasununguka, kushungurudza, kusuruvara uye kurutsa. Kune Lorcaserin, inokonzera; lymphocypenia, euphoria, kuderedza hemoglobin uye musoro. Sibutramine inokonzera kushushikana, kurwadziwa kwepfupa, kuputika, acne, kurwadziwa mumimba, mukomo wakaoma, kuora musoro uye kusagona kurara.
Sibutramine inogona kuderedza huwandu ne4.2% munguva yegore rimwe apo Orlistat inogona kuideredza ne 5% apo Lorcaserin ichidzikisa ne 5-10% mumwedzi gumi nemaviri.
Pane mishonga inobata mhinduro dzeOrlistat here?
Heino urongwa hwemishonga inobatanidza neOrlistat.
Bupropion / naltrexone (Kusiyana)
Cholecalciferol, zinc chelazome / genistein
Cholecalciferol / folic acid
Cholecalciferol (Decara, Replesta, Vitamin D3, D3)
Vitamin d / calcium
Exenatide (Bydureon BCise, Byetta, Bydureon)
Ergocalciferol (Calcidol, Calciferol, Drisdol, Vitamin D2)
Interferon beta-1a (Avonex Pen, Avonex Prefilled Syringe, Rebif Rebidose, Rebif, Avonex)
Insulin zinc yakawedzerwa (Humilin U)
Insulin zinc (Iletin II Lente Nguruve, Iletin Lente, Novolin L, Lente Iletin II, Humulin L)
Insulin nguva dzose
Insulin inhalation, quick acting
Liistronine (Triostat, Cytomel)
Naltrexone (Dhamba, Revia, Vivitrol)
Multivitamin vasati vasvika
Multivitamin ne iron uye fluoride
Nyaya inokoshamations about Orlistat
Usati watora Orlistat, pane zvinhu zvinokosha zvaunoda kuziva nezvazvo.
Yokutanga ndechokuti iwe haufaniri kushandisa chirwere ichi kana uri weergorikiti kwairi. Uyewo kana uine chirwere chisingaperi chine malabsorption (ndiko kusakwanisa kudya zvokudya uye mishonga zvakakodzera) kana chero matambudziko emaronda. Synephrine HCL Inoshanda Sei Muviri Wako?
Unofanirwa kuudza chiremba wako ruzivo rwehutano hwako. Inosanganisira kukurukurirana naye pamusoro pezvirwere zvawakatambura kubva munguva yakapfuura uye chero mishonga iwe uripo. Chiremba anofanira kuziva kana iwe wakatambura nechirwere chechiropa, chirwere chekudya, chinyorwa 1 kana 2 chirwere cheshuga, pancreatitis, gallstones kana kuti utachiona husingaiti. Kana iwe uri kushandisa chero imwe yero kuora kurapa mishonga, haufaniri kunetseka kuudza chiremba.
Munhu wose ari muduku kudarika makore gumi nemasere haafaniri kushandisa Orlistat. Zvingave zvakatemwa kana kuti pamusoro pekambani, unofanira kutsvaga zano rechiremba kana iwe uri pasi pe 18.
Orlistat inofanira kungotorwa chete neanokurudzirwa kutora. Chikonzero chacho ndechekuti inogona kuita kwavari kunyanya kana vane chirwere chekudya. Unodzivisa sei izvi? Ramba uri kure nekusvika kwevamwe.
Kuzadzisa zvakanakisisa Orlistat zvawanikwa iwe haufaniri kushandisa izvi zvinodhaka chete. Inofanira kunge iri chikamu chekureruka kwepurogiramu yako uye inofanira kuiswa pamwe nekurovedza muviri uye kudya. Kuti uchengetedze hutano hwako uchiri kutora mishonga iyi, iva nechokwadi chokuti pane imwe nguva yekudya inokudya iwe unotora ma carbohydrates, mapuroteni, nemafuta zvakagoverwa zvakafanana. Uyezve, tevera kudya kwako uye kurovedza muviri.
Usatora kudya kunenge kuine mafuta nokuti kana uchitora pamwe chete naOrlistat, unogona kuguma uine marwadzo akaipa pamatumbo uye mudumbu.
Chero ani amai vane pamuviri kana anwisa havafaniri kutora Orlistat. Chikonzero cheizvi ndechekuti inogona kupfuudzwa kumwana asati aberekwa kana kuyamwa. Iva nechokwadi chokuti iwe unotora kuongororwa musikana usati wasarudza kushandisa Orlistat. Kana iwe ukava nepamuviri paunotora ichi chirwere, taura nemutano wako wehutano. Ngwarira zvakanyanya paunenge uchitora mishonga yekurapa sezvo iyi mishonga inogona kuita kuti isanyanya kushanda.
Orlistat ndiyo ndiyo nzira yekupedzisira yekurasikirwa kwako. Mhinduro yeOrlistat yakaratidza kukubatsira iwe kurasikirwa ne1bb muvhiki; iyi inorasikirwa nekurasikirwa kwemaviri. Uyezve, zvinokubatsira kuti urambe uine uremu kuitira kuti urege kutarisa zvakanaka nhasi uye uine uremu hwako hwose shure kwemazuva mashoma. Chengetedza kudya kwako uye udye zvakanaka. Iwe haufaniri kutora chips uye bhitoroti panguva imwe chete. Iwe unogona kugara uchichengetedza zvimwe zvezuva rinotevera. Kuita muviri kunobatsira kubatanidza nzira, uye nzira inonyanya kuve yaunogona kuita iri pamitambo yekurovedza. Kuva nomudzidzisi wako pachako kuchakubatsira kuti ugare pazvigunwe zvako. Iye achakupawo zano rokuti izvo zvakakosha zvekushandira muviri wako ndezvipi. Inogona kunge iri bhasi, zvisikwa kana cardio. Kana iwe usati uri fan of gym, bhasikoro kana kumhanya zvinogona kukushandirawo iwe.
Orlistat iri FDA inogamuchirwa uremu hunorasikirwa nemishonga inozivikanwa zvikuru kubudirira kwayo. Nhaurwa dzeOrlistat dzinotaura zvakawanda pamusoro payo nehuzhinji hwevanhu vari kushandisa iko kurasikirwa kupfuura 5% yehuwandu hwavo hwose mugore. Kubatsirwa kwaro kwakapfuura kudarika kurasikirwa mapaundi sezvo kunoderedzawo njodzi yekuwana mamiriro ekutyisa upenyu sehutano hweropa uye yakakwirira yeholesterol.
Iwe ungangodaro uri kunetseka kuti ungatenga kupi Orlistat kuti uwane magetsi zvaunoita pauremu hwako. PaPcoker.com, tinotengesa Orlistat uyo utsvene husina kukanganiswa. The Orlistat mutengo inogona kutengesa, uye isu tinokwanisa kukuvimbisa kuti iwe uchawana kukosha kwebhanga raunoshandisa. Kuisa urongwa nesu hatitore nguva yako yakawanda, zvose zvaunofanira kuita ndeyokuzadza zvawakanyora, mapeji ebvunzo uye waitarisira kugamuchirwa kwekuraira kwako. Kana ukangobhadhara, tinotumira chirwere ichi, uye iwe unogona kuva nechokwadi chokuti hazvizotora nguva refu kusvika panzvimbo yako.
Kurasikirwa nehutano zvakasimba hazvifaniri kunge zvakaoma. Tenga Orlistat nhasi, shandisa mapiritsi panguva yekunyaradza kweimba yako uye tarisa uremu hwako huderedzwa zvikuru.
Mafuta ekudya uye kudira, yakagadzirirwa naAarmand B. Christophe, Stephanie R. De Vriese, Stephanie DeVriese, peji 426- 437.
Kufambira Mberi Mukunyanyisa Kunzvera: 9, yakagadziridzwa naGeraldo Madeiros-Neto, Alfredo Halpern, Claude Bouchard, peji 1046.
Kuwedzerwa kwehupfu uye kuwedzerwa kwehupfumi muChitamende-Primary By Colin Waine, Nick Bosanquet, peji 68-71.
Mhoro, wakagamuchira here chandinopihwa? from2325214cv